तपाईंलाई थाहा छ, मृतकको नाकमा किन हालिन्छ कपास ? हेर्नुहोस् यस्ता छन कारण »
तपाईंलाई थाहा छ, मृतकको नाकमा किन हालिन्छ कपास ? हेर्नुहोस् यस्ता छन कारण
हामी सबैले देखेकै छौँ कि मानिस मरिसकेपछि उसको नाकमा कपास कोचिन्छ । मरेको मानिसले कथन् कदाचित फेरि स्वास फेर्न नपाओस् भन्नका लागि पो यसो गरिएको हो कि ? भन्नुहोला । तर होइन । यसको खास कारण यस्तो छ ।
यसका पछाडि वैज्ञानिक र आध्यात्मिक दुवै कारण रहेका छन् । कुरा गरौँ वैज्ञानिक कारणको । मृत्युपछि मानिसको नाक तथा कानबाट पानी निस्कन्छ । सोही पानी बाहिर नचुहियोस् भन्नका लागि नाक र कानमा समेत कपास कोच्ने गरिन्छ । साथै लासमा निकै छिटो संक्रमण हुने भएको र नाकबाट किटाणुको संक्रमण छिटो हुने हुनाले पनि नाकको प्वाल छोपिदिने गरिन्छ ।
हिन्दु धर्ममा शवको नाकमा कपास कोच्नुको धार्मिक कारण पनि उल्लेख छ । गरुण पुराणका अनुसार मृतकको सरीरका विभिन्न खुला भागहरुमा सुनको टुक्रा राखिदिनुपर्दछ । नाक, कान, आँखा, मुख जस्ता ठाउँमा सुनको टुक्रा राखिदिनुपर्ने यहीँ धार्मिक मान्यता रहेको र नाकको हकमा प्वाल अलिक ठूलो हुने र सुनको सानो टुक्रा खस्ने भएको हुँदा नाकभित्र सुनको टुक्रा हालेर त्यसलाई बाहिरबाट कपासले छोपिदिने गरिन्छ । एजेन्सी
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो एकैदिन १६ जना संक्रमित भेटिए
चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच झ’डप
निषेधाज्ञा कडाइ गर्न काठमाडौंका सडकमा ५ हजार सुरक्षाकर्मी
नेपालमा थप १३ जनामा कोरोना पुष्टि, सोमबारमात्रै २४ जना कोरोना संक्रमित भेटिए
काठमाडौबाट पाँचथर फर्किएका ४ सय ६७ जना क्वारेन्टाईन